ME HANITRA RAZAFIMANATSOA : Ny Movansy Ravalomanana dia tsy manala ny maha kandidà an’i Neny. – MyDago.com aime Madagascar
Teboka efatra no nambaran’ny filoha lefitry ny Cst Hanitra Razafimanantsoa androany teny amin’ny Magro Behoririka dia ny mahakasika ny fifidianana, ny CES, ny maha kandidà an’i Neny, ny FFKM. Ny fifidianana noeritreretintsika hoy izy dia ny 24 Jolay 2013 nefa tsy maintsy hahemotra izany. Isika anefa hoy izy efa vonona ka izay no mahatonga antsika hiantefa any amin’I Neny ny safidy satria matoky tena fa 1eur tour dia vita. Nisy kandidà nametraka tany ho any hoy izy ka niteraka olana ka lasa nisavorovoro ny raharaha satria misy ambadika. Izay novisavisaintsika hoy Me Hanitra ny hoe tsy maintsy hitady ny fomba rehetra hanemorana ny fifidianana izy ireo ka izay no hanaovantsika pré-campagne. Ny fivoriana izay nataon’ny Ceni-T dia nilaza izyireo fa raha ohatra miankina amin’ny fikambanana iraisam-pirenena dia ny volana Septambra no atao, ary raha tsy miaraka amin’izy ireo dia ho sahirana isika. Momba ny kandidà dia nambaran’ity olomboantendry ity fa hatrany am-piandohana isika dia resy lahatra fa manaja ny lalàna rehetra i Neny. Efa nanontany ny fikambanana iraisam-pirenena isika ny amin’ny nampisalasala azy ireo hoe inona no lalàna nohitsakitsahan’i Neny, ny valiny dia tsy nisy. Efa nilaza i Neny hoy ity olomboantendry ity tamin’ny tafa ho an’ny mpanao gazety nataony fa izaho no natolotry ny movansy Ravalomanana dia izaho no eo.Hamafisiko eto hoy izy fa ny movansy Ravalomanana dia tsy manala ny kandidà i Neny. Mahakasika ny CES dia nilaza izy fa ny lalàna nametraka ny CES dia nofidian-dry zareo tao ihany satria ny movansy Ravalomanana dia nivoaka nandritra ny fandaniana izany. Anisan’izany hoy izy ny filohann’ny CES izay izy ireo ihany no nifidy azy, ary ny vokatra avoakany tsy azo ovana ka rehefa namoaka didy izy dia tsy azo ivalozana fa ekeo. Ny fanalana ny maha kandidà an’i Neny dia fanerena azy sy ny movansy Ravalomanana hanitsakitsaka lalàna. Raha misy manova hoy Me Hanitra ny lisitry ny kandidà dia tsy miova io didy io . Isika tsy miady amin’ny fikambanana iraisam-pirenena hoy izy fa ireo ihany no niteny hoe hajao ny lalàna. Ny fanajana ny didy dia fanajana ny lalàna. Noho izany dia miantso ny rehetra hoy izy , ovay io lisitra io dia amin’izay ny vahoaka Malagasy no manitsakitsaka ny lalàna . Tsy ekena anefa izany . Ho avy ny iraky ny Sadc amin’ny herinandro io ka hilaza aminy izahay hoy Me Hanitra hoe tsy hanaiky io sazy io , fa tsy mampaninona anay raha sazinareo izahay raha tsy manala ny kandidànay. Momba ny FFKM dia nambarany fa maro zavatra ataon’izy ireo izay efa nitarika ny famahana ny krizy teny Ambohimanambola ka dia aleo ny FFKM no hanao izanyrehefa tsy nahavita ny fikambanana iraisam-pirenena. Nasiany resaka ihany koa ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Efa nanao ny fomba rehetra izahay hoy izy , efa tsy nitabataba sy nanao fandrangitana izahay nefa mbola navoakan’ilay rangahy ny Notam.
Tadidio hoy izy fa ny ray amandreny am-panahy no hanaovana izany fa tsy ho zakanareo ny vokatry izany. Ny FFKM hoy izyefa nilaza fa tsy maintsy tanterahana ny fihaonana ary tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana Marc.
Me RAZAFIMANATSOA HANITRA : TSY MAINTSY TAFITA NY KANDIDANTSIKA
1 pensée sur “ME HANITRA RAZAFIMANATSOA : Ny Movansy Ravalomanana dia tsy manala ny maha kandidà an’i Neny.”
7 juillet 2013 à 23 h 02 min
Ho tanteraka tokoa anie izany . Aaaaaameeeennnnn!!!
Précédent Article précédent : “tsy mpitondra manam-pahefana matanjaka no ilain’i Afrika fa Andrimpanjakana matanjaka”
Suivant Article suivant : RAKOTOARIVELO MAMY : Tsy misy ambonin’ny lalàna eto.